Natraygroup | natray
Posted by natray | Brands | No Comments
Gold Coil စပရိန်မွေ့ယာသည် ဈေးနှုန်းချိုသာ၍ ကျန်းမာရေးနှင့်လည်း အထူးညီညွတ်ပြီး၊ ပေးရသော တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှသော အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိစေသဖြင့် မှန်ကန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
– Gold Coil စပရိန်မွေ့ယာကို နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ အသုံးပြု၍ Singapore နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
– Anti-Dust mite damask cover များကိုလည်း အသုံးပြုထားပြီး ပိုးမွှားများ မကပ်ငြိနိုင်စေရန် ကာကွယ်ထားပါသည်။
– အသုံးပြုထားသော Foam များမှာ သိပ်သည်းဆမြင့်မားပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သဖြင့် ကြာရှည်ခိုင်ခံ့ကာ အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
–2.4 mm အထူရှိသော Bonnell စပရိန်များကို အသုံးပြုထားသဖြင့် အခြားမွေ့ယာများကဲ့သို့ ကျွတ်ဆတ်မာကျောခြင်း မရှိဘဲ အိပ်စက်ရာတွင် အိစက်ညက်ညောပြီး သက်သောင့်သက်သာဖြစ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
– Gold Coil မွေ့ယာများကို (၁၀) နှစ် အာမခံ Warranty ပေးထားပါသည်။
Posted by natray | WHATNEW | No Comments
What can you get fromamassage chairs? Your massage chair is customized to give you exactly what you deserve—chill-out moments, relaxations, improved health, and well-being. It performsavariety of specialized massage techniques and Read More
Yangon Lifestyle Furniture Fair 2016
ရန်ကုန်မြို့ ၊ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ တပ်မတော်ခန်းမမှာ မတ်လ ၂၄ ရက်မှ ၂၈ ရက်ထိ (၅) ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ “Yangon Lifestyle Furniture Fair 2016 ” ကို Casabella မှ Platinum Sponsor အဖြစ် ပါဝင်ခွင့် ရခဲ့တဲ့အတွက် အထူး ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ Read More
Posted by natray | PROMOTION | No Comments
လူတိုင်းမှာ အမေရှိကြတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒါဟာ လူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးပါ။ Read More
Posted by natray | OFFICE FURNITURE | No Comments
E’KO Office Chair